Ihe Sean Sullivan dere na Martech Zone |
Edemede site na Sean Sullivan kwuru
Sean Sullivan kwuru
Sean Sullivan bụ onye ọbịa na Gbanwee Kọfị. Mgbe ọ na-agaghị Podcasting, ị ga-ahụ Sean na ịkparịta ụka n'eventsntanet ihe, omenala ihe, na kọfị ụlọ ahịa na-ehota ọtụtụ fim.
SumoMe: Duru Generation n'ihi na gị na saịtị… na Great Nkwado
Satọde, Febụwarị 21, 2015 Mọnde, Jenụwarị 4, 2021 Sean Sullivan kwuru
N'oge na-adịbeghị anya, m na-agụ ebe nrụọrụ weebụ Jeff Goins ma chọpụta ihe njikọ ole na ole m na-amataghị na saịtị WordPress ya. Ejiri m WordPress Theme Search mee nyocha. Jeff na-eji ngwa mgbakwunye akpọ SumoMe nke AppSumo mere. Mgbe m nyochachara atụmatụ niile nke SumoMe, enwere m afọ ojuju. Enwere m ajụjụ ụfọdụ gbasara plugins na ndị otu SumoMe zara ma za ha niile otu ụbọchị. Ọ dị mma ịhụ nke ahụ